प्रचण्ड-नेपाललाई ओलीको प्रश्न: निर्वाचन घोषणा भएपछि पार्टी फुटाउने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्ड-नेपाललाई ओलीको प्रश्न: निर्वाचन घोषणा भएपछि पार्टी फुटाउने ?
प्रचण्ड-नेपाललाई ओलीको प्रश्न: निर्वाचन घोषणा भएपछि पार्टी फुटाउने ?
पुस १७ गते, २०७७ - १४:०१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटेको होइन केही साथीहरु अलग भएर गएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रवासी नेपाली एकतामञ्चको जुम भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड-माधव पक्ष गणतन्त्र र लोकतन्त्रका विरुद्ध लागेको आरोप लगाउँदै आफै पार्टी फुट्यो भनेर हिँडेको बताएका छन् । ‘पार्टी फुटेको होइन केही साथीहरु अलग हुनुभएको छ । आफै अलग्गिएर जानुभएको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि पार्टी फुटाउने ? ओलीले प्रश्न गरेका छन् । पार्टी फुटाएर दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ । उहाँहरु समाजवाद उन्मुख बाटो भत्काउनेतर्फ लाग्नुभएको छ’ओलीको भनाइ छ ।
उनले प्रचण्ड-माधव पक्ष लाइन लागेर अदालत, निर्वाचन आयोग र सडकमा गएको पनि बताए । ‘सडकमा जानु भएको छ । सत्तोसराप गरेर जनताको मन दुखाउनुभएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको हुर्मत लिने, अग्रगमनका बाटाहरु कमजोर पार्ने प्रयास बन्द गर्नुस्,’ओलीले आग्रह गरे ।
‘मैले आफ्नै जिन्दगीमा पनि स-साना समूह तितरवितर भएका पार्टीहरूलाई एक गरेर आफैंले दुई तिहाइ ल्याएको अनुभव सँगालेको छु। जेलमा हुँदा पनि मैले कहिले आशा गुमाइनँ,’ ओलीले भने, ‘अहिले हाम्रा विचार महान् छन्, सही बाटो लिएका छौं। सशक्त संगठन र सक्रिय छौं। तसर्थ देशको अग्रगमनको यात्रा अगाडि बढ्छ, सहयोग पुर्‍याउनुस्।’
निराश जनता खतरनाक हुने भनाइ उल्लेख गर्दै उनले देशको अग्रगमन आशावादीता र आत्मविश्वासबाट बन्ने बताए।
पुस १७ गते, २०७७ - १४:०१ मा प्रकाशित